#Oduu Tarkaanfii WBO Zoonii G/galaa – Ayyaantuu Online
HomeAfaan Oromoo#Oduu Tarkaanfii WBO Zoonii G/galaa
#Irree fi gaachanni Ummata Oromoo WBOn Zoonii giddu galaa lixa shaggar keessa sosso’u ganama har’aa 18/12/2029 sa’aatii 1:00 irraa eegalee hanga sa’aatii 7:45 tti waraana weerartuu sirna PP haleelaa tureera.
Haaluma kanaan Waraanni Bilisummaa Oromoo WBOn Zoonii Giddu galaa Lixa shaggar keessa sosso’u Aanaa Gindabarat ganda #Cirrachaa naannoo #Gatoo jedhamutti Waraana weerartuu bilxiginnaa haleeluun 58 ajjeesuun 9 ammoo madoon adabee jira.
#Humnoota waraana weerartuu ajjeefaman keessaa humni Milishaa Naannoo Amaaraa #Gojjam irraa daangaa qaxxaamuruun maqaa sakatta’insa WBOn akeeka lafa babal’ifannaa fi Olaantummaa Nafxanyaa deebisuuf humna weerartuu Humna Addaa Oromiyaa jettee of waamtu waliin bobbaate keessaa milishoonni Amaaraa 10 warra ajjeefaman keessatti kan argaman ta’uu ragaan qulqulleeffanneerra.
#Waraana weerartuu kana irraa qawwee AKM 11 hiikuun moonaa QBOf galii godhee jira.
Haleellaa WBOn kan aarte waraanni goolessituu bilxiginnaa kun humna dabalachuun ollaa ummataatti ol dachaatee ummata nagaa (qonnaan bultoota) nama 17 ajjeesuun Manneen qonnaan bulaa 7 abiddaan barbadeessitee jirti.
Lolli waraana weerartuu bilxiginnaa irratti taasifamu jabaatee kan itti fufu ta’uu ajaji WBO Zoonii kanaa jaal #Sanyii Nagaasaa hubachiisaniiru.
=>Lolli Bilisummaa Walabummaa Oromiyaa qofaan dhaabbata!
Gaaffii fi Deebbii Ajajaa WBO Zoonii Gujii Bahaa Jaal Magarsaa Lammii Waliin Gaggeeffame
WBO lixa shaggar tarkaanfii fudhateen humna diina 60 ol hojiin ala godheet Jira.
Haaluma kanan waraanni bilusummaa Oromoo(WBO) zoonii lixa shaggar ganama Local time saatii 12:00 irratti maqaa humna addaa fi milishaa ofiin jettee uummata goolaa jirtu Aanaa gindibarat ganda cirachaa gatoo bakka gatoo jedhumtutti haleellaa fudhateen 20 ajjeessee 15 ol madeessuun itti fufuun guyyuma kana local time saatii 7:30 Irratti humna reebuu dhuftutti haxxee hidhuun ganduma kana bakka MIRKI jedhamutti 10 battalumatti ajjeessuun 15 ol madeessuu ajajaan WBO naannoo sana ibseera
Humni goolleessittu sirna nafxanyaa kun tarkaanfii kanaan kan baargidde waraanni shiftaa kun yeroo ammaan kana manneen uummata hedduu gubuu fi uummata nagaa goolurratti argamti.